‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ गीत विवादमा, के भन्छन् कलाकार ?
कोशी अनलाइन बिहिबार, १६ साउन, २०७६ मा प्रकाशित
केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको गायक आर्जन पाण्डेले गाएको ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’बोलको गीत चर्चामा आएको छ । चर्चाको कारण गीत राम्रो भएरभन्दा पनि महिलाको शरीर र सुन्दरतामाथि मजाक उडाएर विवादमा तानिएकोले भएको हो ।
गीतको भिडियोलाई मन पराए पनि गीतको शब्दलाई भने धेरैले मनपराउन सकेका छैनन् । आर्जेनले गएको गीतको शब्द प्रतीक पौडेलले लेखेका हुन् । गीतमा गायक आर्जनका साथ अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माको प्रस्तुति रहेको छ । आफूलाई बौद्धिक छविकी अभिनेत्रीका रुपमा उभ्याउँदै आएकी तथा नारी स्वतन्त्रताको बिषयमा थुप्रै पटक अभिव्यक्त गरेकी रीमाले अभिनय गरेको कारण रीमाको समेत आलोचना भएको छ । ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ बोलको गीतको शब्दलाई लिएर अहिले ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।
उक्त आलोचनामा दर्शक मात्र नभएर संगीतकर्मीदेखि लिएर ठूला–ठूला कलाकारले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् । गीतमा महिलालाई निकै होच्याइएर देखाइएको छ । यस्तैमा निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले ‘गीत लेखेपछि पूरै लेख्या भए हुने, आज घाँटीभन्दा मुनि मात्रै आयो । भोलि नाइटोभन्दा मुनि मात्रै आउला । त्यसपछि कम्मर, हैट । भनेर ब्यङ्ग्य गर्दै स्ट्याटस लेखेका छन् ।
यस्तै, कलाकार निर्मल शर्माले ‘बजारमा नयाँ गीत आएको रहेछ, गीतमा पुरुषले महिलालाई भन्छ ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे । भगवानसँग कामना गर्छु यो गीत मेरा छोराहरुले सुनेर नगाइदिउन र श्रीमती, ममी, दिदी, बहिनीको अगाडि मैले लाजले मुख छोप्न नपरोस् भनेर लेख्दै आफ्नो फेसबुकको वालमा सेयर गरेका छन् । गीतको आलोचना सुरु भएसंगै रीमाले यस्तो गीतमा कसरी अभिनय गर्न मानिन् ? भन्ने तर्क पनि सुरु भएको छ ।
रीमाका साथै अभिनेत्री केकी अधिकारी समेत आलोचित बनेकी छिन् । केकीले यो गीतको प्रमोशनका लागि टिकटक बनाएर सेयर गरेपछि उनी पनि आलोचनाको सिकार भएकी छिन् । गायक आर्जनसँग केकीको प्रेम रहेको कारण केकीले आर्जनको यो गीतमा केहि भन्न नसकेको अनुमान गरिएको छ । आर्जनले यो एक युवा लक्षित गीत भएको र गीतले पूरै कथा बोकेको बताएका छन् ।
प्रेम सम्बन्धमा धोका पाएका युवाहरुको कुरा गीतले देखाउन खोजेको भन्दै गीतका शब्द केही आपत्तिजनक नरहेको र आफूले उक्त गीतलाई पश्चिमी गीतहरुसँग गीत दाँजेर हेरेको बताएका छन् । आर्जनको यो छैठौँ गीत हो । उनले यसभन्दा अगाडि पनि सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित गीत गाएका छन् ।
मंसिर २१ मा लगनगाठो कस्दै ऋचा
बन्द हुँदै ‘कौन बनेगा करोडपति’
अनमोल केसी बने सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार
‘इण्डियन आइडल’ बाट निकालिए अनु मलिक
९ गतेबाट प्रशारण हुने ‘कमेडी च्याम्पियन’को प्रोमो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सन्नी लियोन र दीपिकालाई उछिन्दै प्रियंका बनिन् गुगलमा अत्यधिक सर्च गरिने अभिनेत्री
खुर्पाप्रहार गरी बुबा–आमाको हत्या
अरुण तेश्रोमा आयोजनाको सुरुङमा ढुंगा लागेर तीन कामदार घाइते
दुई गाडीको गाडीको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु
मनमोहन पोलिटेक्निक बन्यो प्राविधिक विश्वविद्यालय
युक्रेनमा आगलागीमा १४ बेपत्ता, २७ घाइते
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई पुन: म्याद थप गर्न अदालत लगियो
दुहबीको चार बहुवर्षीय योजना सार्वजनिक